विप्लवको तालिमकेन्द्र तीन दिनदेखि खोज्दैछ प्रहरी | सुदुरपश्चिम खबर
विप्लवको तालिमकेन्द्र तीन दिनदेखि खोज्दैछ प्रहरी
विप्लवको तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेको भनिएको गुँदेल गाउँ
२१ जेठ ओखलढुंगा : सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिका–५ स्थित गुँदेलमा प्रतिबन्धित विप्लव समूहले सञ्चालन गरेको भनिएको तालिम केन्द्र प्रहरीले अझै फेला पार्न सकेको छैन ।
नेपाल समूहको राजनीतिक प्रस्ताव :ओलीको निर्णय नसच्चिएसम्म समानान्तर रोकिन्न
कांग्रेस सभापति देउवा : नयाँ सरकार बनाउन संख्या सुनिश्चित भएको छैन
आइतबारदेखि परिचालित सुरक्षाकर्मीले छेस्काम चौकी कब्जा गर्न आएका विप्लव कार्यकर्ता र उनीहरुको तालिम केन्द्र फेला पार्न नसकेका हुन् । गुँदेलमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेको सूचना प्रहरीलाई आइरहेकै समयमा आइतबार छेस्कामको चौकी कब्जा गर्न हतियारधारी समूह आएको सूचना पाएपछि प्रहरीले चौकी छाडेका थिए । यसैलाई आधार बनाएर विप्लवले चौकी कब्जा र आक्रमण गरेको हल्ला फैलिएपछि देशभर तरंग ल्याएको थियो ।
विप्लवको गतिविधी बढेको सूचनाका आधारमा गस्ती र सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि तालिम केन्द्र फेला परेको छैन । सोलुखुम्बुको महाकुलुङलाई केन्द्रित गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोली नै परिचालन गरेर तालिम केन्द्र र विप्लवका कार्यकर्ता खोजी भइरहेको छ ।
१ नम्बर सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रानी विराटनगरबाट डीएसपीको नेतृत्वमा ५० र केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलबाट ३० गरेर ८० जना प्रहरीको विशेष टोली सोलुखुम्बुमा सर्च अभियानमा छ ।
गुँदेलमा बिजुली र टेलिफोन अझै सुचारु हुन नसक्दा वास्तविक सूचाना आदानप्रदानमा पनि समस्या छ । यसका लागि ओखलढुंगाबाट समेत प्रहरी टोली खटाइएको छ ।
बाहिरबाट लगिएको र जिल्लाभित्रकै सुरक्षा टोलीले विभिन्न ठाउँमा सर्च अभियान सुरु गरेर विप्लव समूहका कार्यकर्ताको खोजी तीव्र पारेको बताइएको छ । सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मगरका अनुसार अहिलेसम्म एकजना पनि विप्लव कार्यकर्ता र हतियाधारी भनिएको कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । जिल्ला शान्त रहेको पनि उनले दावी गरे ।
सोलुखुम्बुको सदरमुकामभन्दा निकै टाढाको दूरीमा रहेका छेस्काम र गुँदेल संखुवासभा र भोजपुरसँग सिमाना जोडिएका गाउँ हुन् । यस क्षेत्रमा विप्लवका उच्च तहका नेता आएको अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन् : शान्त छ महाकुलुङ
चौकी आक्रमणको हल्ला नसुनुन्जेल छेस्काम र गुँदेलका स्थानीय ढुक्क थिए । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि महाकुलुङ अशान्त भएको गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँती बताउँछन् ।
उनले टेलिफोनमा भने, ‘बाहिर मात्रै हल्ला छ, महाकुलुङ शान्त छ, छेस्कामका स्थानीय ढुक्कका साथ दैनिकी चलाइरहेका छन् ।’ मिडियाले देशैभर छेस्काम र गुँदेलबारे अफवाह फैलाएकाले मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रास बढेको किराँतीले बताए ।
४ जना मन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रले गर्यो कारवाही, साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासित !!
नेकपा एमालेका झलनाथ–माधव पक्षको आज स्थायी कमिटी बैठक बस्दै !!
भीम रावल र माधवकुमार नेपाल एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बित !!
देशभरका पार्टी कमिटी ब्युँताउने माधव नेपाल समूहको घोषणा !!
नेकपा सचिवालय बैठक भाेलि पनि, कार्यविभाजनमा छलफल केन्द्रित
नर्भस किन भइन् आलिया
नयाँ दल दर्ता गृहकार्यमा नेपाल समूह, चुनाव चिह्नबारे छलफल सुरु !!
बजेट सिलिङप्रति मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट !!
माधवकुमार नेपालसहित ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण !!
आफन्त बिदाइ गर्न नआउन त्रिभुवन विमानस्थलको आग्रह !!
सरकार चलाउन कांग्रेसको अरुचि !!
म निस्केको बेला :